Shiinaha Customized Isgaarsiinta qalabka hiitarka soo saareyaasha, warshad - Dongguan Guancheng qirayso Hardware Co., Ltd.
Hoyga > Kuleylka kuleylka Kuleylka kuleylka > Qalabka hiwaayadda isgaarsiinta
Qalabka hiwaayadda isgaarsiinta
Qalabka hiitarka isgaarsiinta laftiisa ayaa loo shaqeeyaa sida saxanka oo dhan, qaab dhismeedkiisuna wuxuu leeyahay saxnaan dulqaad cabbir sare leh, sidaa darteed qaybaha ayaa lagu soo ururiyey hiitarka isgaarsiinta si sax ah.
1. Dabeecadda dabeecadda isgaarsiinta dabeecadda lafteeda lafteeda waxaa loo shaqeeyaa sidii saxan dhan, qaab dhismeedkiisuna wuxuu leeyahay saxnaan dulqaad cabbir sare leh, taasoo ka dhigaysa qaybaha la isugu geeyay qalabka hiitarka isgaarsiinta mid sax ah.
2. Faa'iidada aluminium aluminium ee ka baaraandegidda qalabka isgaarsiinta ee hiitarka, waxay la kulmi kartaa qaabdhismeedka farsamooyinka ee dhammaan dhinacyada nolosha, qaab dhismeedka qalabka elektaroonigga ah si loo horumariyo loona farsameeyo soosaarka hiitarka
3 cilladaha habka farsamaynta waqtiga, cufnaanta wax shiidaya walxaha waa weyn tahay, qashinka qalabka. Geedi socodka geedi socodka, geedi socodka ka baaraandegista kuleylka kuleylka ee sheyga ayaa u sahlaya badeecada inay fududaato, fududaato qiiqa dabiiciga ah.
Calaamadaha kulul: Isgaarsiinta hiitarka qalabka isgaarsiinta, Shiinaha, kartoo, Soosaarayaasha, Warshad
Khilaaf radiator alxanka
Qalabka hiitarka kululeeyaha